Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbland oo ka biyadiidan Gudiyada doorashada ay magacawday Dowlada Federaalka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbland oo ka biyadiidan Gudiyada doorashada ay magacawday Dowlada...
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbland oo ka biyadiidan Gudiyada doorashada ay magacawday Dowlada Federaalka
Nairobi ayaa kulamo ay yeesheen isku raacay in go’aan mideesan ka qaataan magacaabista guddiyada doorashada ku matalayo iyo waxa ay ka yeelayaan guddiyada la saluugsan yahay ee dowlada soo magacawday.
Labadan maamul goboleed ayaa la sheegay in aysan raali ka aheyn sida Xukuumada Soomaaliya u maareeneyso doorashada, waxa ayna kasoo horjeedaan faragalin la sheegay in doorashada ku heyso Villa Soomaaliya.
Guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ku matalaya inta badan dowlad Goboleedyada iyo dowlada federaalka Soomaaliya ayaa lasoo magacaabay, waxaana hada u muuqataa in jadwalkii horey loogu heshiiyay aan la raacin uuna jiro dib u dhac.
Previous articleArmenia oo sheegtay 2,317 askari looga dilay dagaalka Azerbaijan
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo xukun riday Nin Lagu qabtay 218 Xabo oo Rasaasta AK47
Maalmo kaddib Shiinaha oo u hambalyeeyay Madaxweynaha la doortay ee USA...
Shiinaha ayaa ugu danbeyntii u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden kaddib in muddo ah uu ka aamusnaa guusha Biden. "Waxaan qaddarineynaa doorshada...
Jeneral Mascuud oo Wacad ku maray in shabaab uu ka saarayo...
Hub aruursi balaan oo laga dareemayo magaalada Muqdisho iyo sara...
Dagaalka ka socda gobolka Tigray oo sii xoogeystay, kadib Ciidamada Dowlada...